Iindlela ezisebenzayo zokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Iindlela ezifanelekileyo zokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram
Disemba 19, 2018 0 IiCententarios 962
I-Instagram ifumene ukuthandwa okukhulu kule minyaka idlulileyo. Iyaziwa ngabantu bazo zonke iintlobo zabantu kunye nakuzo zonke iindlela zobomi. Kwimeko ye-Instagram, inani labalandeli olifumanayo lelona libaluleke kakhulu. Kule posi sikuxelela indlela yokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram.
Inani labalandeli lilingana nempumelelo ye-Instagram
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba kuninzi kakhulu kwi-Instagram ngaphezu kwenani labalandeli onokuthi ulufumane. Nangona kunjalo, inani lakho labalandeli lelinye lamanyathelo abalulekileyo (okanye metric) yesixhobo seendaba yoluntu. Ukuba ulandela enkulu, abanye abantu baya kuba nembono yokuba wena (kunye neshishini lakho) uyimpumelelo. Oko kuyanceda ukuthembeka kwakho kunye nokuzithemba kwengcali. Ngesi sizathu, abantu abaninzi ngakumbi bafuna Thenga abalandeli kwi-Instagram.
Inani elikhulu labalandeli likunika ukuthembela ukuba abanye abantu bafumana umyalezo wakho kwi-intanethi kwaye bayakuvumela ukuba unyuse ukufikelela kwakho kwinani elikhulu lonxibelelwano olusemgangathweni. Kukwanegalelo elikhulu ekomelezeni ubudlelwane bakho nabaphulaphuli bakho ekujolise kubo, okubalulekileyo kwimpumelelo yakho. Ke ngoko kubalulekile ukuba wazi ezinye izitshixo zokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram.
Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwee-hashtag
Ukongeza kwi ezinye izimvo zokuthatha iifoto kwi-InstagramXa kufikwa ekufumaneni ngakumbi ukubonakala kunye nokubonakala, ii-hashtag ziyindlela entle yokwenza. Nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ukuba ungabanjiswa xa kuziwa ekusebenziseni ii-hashtags. Isizathu sokuba ungafuni ukuyigqithisa ngama-hashtag kukuba abaphulaphuli bakho abajongi abayi kuyithanda kwaye, ngenxa yoko, abanakuhlala nawe. Kukho ezinye isikhokelo ekufuneka silandelwe xa usebenzisa ii-hashtag ke ufumana ezona ziphumo zihle kumalungu abaphulaphuli bakho.
Sebenzisa ii-hashtag ezikhethekileyo.
Yenza ngokwezifiso i-hashtag kwijelo leendaba elithile loluntu olisebenzisayo
Qiniseka ukuba ii-hashtag zakho zomelele kodwa azikho zentengiso
Yenza ii-hashtag zakho zicace kwaye zimfutshane
Sukusebenzisa ii-hashtag ezininzi.
Cwangcisa umsitho apho udibana khona abantu abaneempembelelo, ii-ambass ze-brand, abalandeli abathembekileyo, njl, yindlela enhle yokwandisa abalandeli bakho be-Instagram. Iziphumo zomnyhadala onjalo zinokuchazwa, ukuze uzuze abalandeli abaninzi kwi-Instagram, udale ulwazi lwe-brand kunye nokuzibophelela kumalungu abaphulaphuli bakho. Unako kwakhona beka umculo kwi-Instagram.
Gijimani kukhuphiswano olufanelekileyo
Abantu bayaluthanda ukhuphiswano, ngakumbi ukuba baphumelele ibhaso abacinga ukuba kufanelekile ukuba bazibandakanye. Umdyarho unokuvelisa uninzi lwezimvo malunga neshishini lakho, yenza abantu bonwabe ngokuthatha kwakho inxaxheba kwaye wakhe ubudlelwane obuqinileyo kunye obuhlala buhleli. Kubalulekile ukuba ubonelele ngenkuthazo efanelekileyo. Ezinye zeendlela onokuthi wenze ngazo abantu bathathe inxaxheba kukhuphiswano lwakho kukubenza ukuba "bathande" ukhuphiswano, babeke izimvo kukhuphiswano lwakho (abantu bayathanda ukuveza izimvo zabo kwaye baziva ngathi izimvo zabo zibalulekile wena). ), kunye nezinye iindlela zokudala ukubandakanya abantu.
Nceda abalandeli abathembekileyo babandakanyeke
Enye indlela elungileyo yokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram ukubandakanya abalandeli abathembekileyo. Bayeke bakuncede ukuqhuba umsitho okanye ukhuphiswano. Banike ilizwi kwaye ubenze bazive ukuba ukuxabisile ukuthatha kwabo inxaxheba. Zininzi izibonelelo zokwenza oku, ezinjengokunika uphawu lwakho kwiimvakalelo / imvakalelo yomntu, ukwandisa ukufikelela kwayo, ukwandisa igama layo, ukonyusa ukugcwala kwabantu kunye nokwenza abantu abaninzi bazi uphawu lwakho.
Qhagamshela kunye noluntu ekuhlaleni
Ukuba nembono yokuba lilungu loluntu kubalulekile kwimpumelelo yakho ekhulayo njengomntu weshishini. Ayibalulekanga ukuba yinxalenye yoluntu lwasentlalweni, kodwa kubalulekile ukuba unxibelelane namalungu oluntu (okanye uluntu). Uya kufuna ukunxibelelana ngezi ndlela zilandelayo:
Yabelana ngebali lakho: Wonke umntu unebali (mhlawumbi elingaphezulu kwesinye). Yabelana ngento yakho kuba iya kusebenza namanye amalungu asekuhlaleni. Ukuba abantu banokuhambelana noko babelana ngako, baya kuphumelela ekusekeni ubudlelwane kunye nabo. Oko kubalulekile kwimpumelelo yakho.
Qiniseka ukuba abanye bafuna ukwabelana ngomxholo wakho: Yinto enye ukubhala imixholo ekumgangatho ophezulu, kodwa enye into kukwenza ukuba abantu bafune ukwabelana ngomxholo owabelana nabo. Ukuba umxholo wakho wabelwe, unokutsala abantu abaninzi kwaye wandise abalandeli bakho be-Instagram.
Ngokucacileyo ziqonda ngokucacileyo izizathu ezingokwasentlalweni. Kubaluleke kakhulu kuwe ukuba ube nokuqonda okucacileyo malunga nokuba kutheni kufuneka wakhetha intlalontle yakho. Zininzi izizathu, kodwa nganye nganye ibalulekile kwaye nganye mayibe sentloko yakho maxa onke.
Shicilela umxholo ngendlela evakalayo
Ukususela ekuqaleni, ubeneqhinga lokuthengisa elibonakalayo kwishishini lakho. Kuyinxalenye yesicwangciso seshishini lakho kwaye kufuneka ulandele imephu yendlela ukuze ufikelele kumanqanaba obekele kuwo ukuba uhlangane nawo. Eyona nto ibalulekileyo ekuqaleni isabalulekile kwishishini lakho. Kungenxa yoko kufuneka ufumane indlela yokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram.
Zibandakanye nabanye abantu kwi-Instagram
Akwanelanga ukuseka iakhawunti ye-Instagram. Kufuneka unxibelelane nabantu. Oko kuthetha ukuba kufuneka "uyithande" i imifanekiso abanye abantu ukupapasha kwaye ushiye izimvo. Yiba nenxaxheba kwingxoxo. Kubalulekile kwimpumelelo yakho.
Buza imibuzo: Njengamanye amajelo eendaba ezentlalo, kuya kufuneka ubuze imibuzo kwi-Instagram. Buza imibuzo ekwenza ucinge kwaye yenza abantu bafune ukutsiba kwaye baqalise ukunxibelelana. Yile ndlela kanye yokwakhiwa kobudlelwane.
I-Instagram yenye yezixhobo ezisebenzayo zemidiya yoluntu onokuthi uqwalasele ukuzibandakanya kwishishini lakho. Nge-Instagram, imalunga nenani labalandeli onokufumana. Inyani yile yokuba ngaphandle kwenani elikhulu labalandeli, wena kunye neshishini lakho liya kuba mnyama. Kuya kufuneka ukuba uphathwe zixhobo ngesixhobo kwaye uthandwe ukuze ishishini lakho liphumelele. Kubalulekile ukuqonda ukuba yintoni ekufuneka yenziwe ukuze ukwazi ukuthatha ishishini lakho kwinqanaba elilandelayo kwaye ufumane abalandeli abaninzi kwi-Instagram.
1 Inani labalandeli lilingana nempumelelo ye-Instagram
1.1 Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwee-hashtag
1.2 Yenza umcimbi
1.3 Gijimani kukhuphiswano olufanelekileyo
1.4 Nceda abalandeli abathembekileyo babandakanyeke
1.5 Qhagamshela kunye noluntu ekuhlaleni
1.6 Shicilela umxholo ngendlela evakalayo
1.7 Zibandakanye nabanye abantu kwi-Instagram
Disemba 19, 2018
Ukunyuka kwe-Instagram kunye nento onokuyenzela ishishini lakho
Indlela yokukhuphela iifoto ze-Instagram